Zavatra kely heverina ho tsy misy dikany dia efa miteraka fifamaliana tsy roa aman-tany izay miofo ho fifampikasihan-tanana ary mahafaty olona mihitsy. Mahatsikaiky nefa mampalahelo ny tranga nisy tamin’ny 11 janoary teo. Resaka hira anaty karaoke no andatsahana ain’olona. Araka ny fanadihadian’ny mpitandro ny filaminana dia fifandrangitana no niantombohany. Miteraka fahasosoran’ny olona matetika ny fahasahiranana. Ny fananam-bola koa anefa mitarika fizahozahoana, indrindra, amin’izao andron’ny seho ivelany izao. Mitady hodimbiasan’io fifamonoana io indray ankehitriny ny fitsaram-bahoaka. Mila mandini-tena !